We.com.mm - ကြောင်လေးတွေကို အစာကျွေးပြီးမှ ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ထမင်းစားရသူ အိမ်ယာမဲ့အမျိုးသား
ထိုင်းနိုင်ငံက လွန်ဒမ် ( Loong Dum ) ဆိုတဲ့အိမ်ယာမဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ လမ်းမပေါ်က လေလွင့်ကြောင်လေးတွေကို အစာကျွေးပြီးမှ ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ထမင်းစားရသူပါ။ သူ့အကြောင်းက ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာ တော်တော်လေးလူသိများခဲ့ပါတယ်။
သူက အိမ်ယာမဲ့ဆိုပေမယ့် တောင်းစားတာတွေဘာတွေမလုပ်ပါဘူး။ သံပုရာသီး တွေရောင်းပြီး သူ့ရဲ့တစ်နေ့တာဝမ်းစာကို ရှာဖွေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သံပုရာသီးဆိုတာ အချိန်တိုင်းလိုအပ်နေတဲ့ အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်တစ်ခါတစ်လေကျရင်တော့ သူညစာဝယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပိုက်ဆံမရပါဘူး။
သူ့မှာ သံပုရာသီးတွေရောင်း တာအပြင်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ လမ်းပေါ်က ကြောင်လေးတွေကို အစာကျွေးတာပါ။ လေလွင့်ကြောင်လေးတွေဟာ သူ့အဖော်ဖြစ်ပြီး ခုံးတံတားကြီးအောက်က ထောင့်လေးတစ်နေရာကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာ သူ့ကိုပထမဆုံးစောင့်ကြိုနေသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။
မိသားစုမရှိ၊ ကလေးမရှိပေမယ့် ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ လွန်ဒမ် ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေအတွက် အကင် နဲ့ အသင့်စားအစာတစ်ချို့ကိုဝယ်သွားတတ်သလို လမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေမှာ ရောင်းတတ်တဲ့ ထမင်းကြော်ဘူးလေးတွေကိုလည်း ဝယ်တတ်တယ်။ ရောင်းကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်တော့ အသားဗူးလေးတွေပါလာတတ်တယ်။ အဲ့ဒီအခါ ကြောင်လေးတွေပျော်ရတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဈေးရောင်းမကောင်းပဲ ပိုက်ဆံနည်းတဲ့နေ့တွေမှာတော့ သူအနစ်နာခံရပါတယ်။ အစားအသောက်က မလောက်တဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် လိုအပ်တာကိုဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံမကျန်တော့တဲ့အခါမှာ သူမစားပဲ ကြောင်လေးတွေကိုသာ ဦးစားပေးတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီညကတော့ လွန်ဒမ် အတွက်ရေသောက်ဗိုက်မှောက်ရုံပါပဲ။
လွန်ဒမ် ရဲ့အကြောင်းကို ဝရူနာ ဝတ်ထနာ့စူပါချော့ ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က စပြီးသတိထားမိရာကနေ သူ့အကြောင်းဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူသိများလာတယ်။ အမျိုးသမီးက သူ့ဆီကနေ သံပုရာသီးတွေဝယ်တဲ့အခါ သူရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးကိုသတိထားမိတယ်။ " သံပုရာသီး ( ) ပါ တစ်အိတ်ကို ဘတ်နှစ်ဆယ်ပါ။ ကျန်တဲ့အမြတ်ကိုတော့ ကြောင်လေးတွေအစာအဖြစ်သုံးပါတယ် " ဆိုပြီးရေးထားတာပါ။
ထမင်းစားဖို့မရှိတဲ့ညတွေမှာ ကိုယ်တိုင်အငတ်ခံပြီးကြောင်လေးတွေကို ထမင်းဝအောင်ကျွေးတဲ့အကြောင်းကို ဘန်ကောက်က တိချစ်သူတွေသိရတဲ့အခါ သနားဂရုဏာဖြစ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ သံပုရာသီးတွန်းလှည်းလေးကို လူသိလာကြပြီး ဝယ်သူတွေများလာတယ်။ တစ်ချို့က ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သက်သက်လာကြပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ သံပုရာသီးတွေကိုတန်ရာတန်ကြေးထက်ပိုပေးပြီး ဝယ်သွားတဲ့အပြင် သူနဲ့ကြောင်လေးတွေစားဖို့ အစားအသောက်တွေပါ ပေးသွားကြတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ တိချစ်သူတစ်ချို့စုပေါင်းပြီး သူ့ကိုအဝတ်အစားအသစ်တွေဝယ်ပေး၊ ဆံပင်ညှပ်သန့်စင်ပြီး Spa ပါ ပို့ပေးခဲ့တာကြောင့် လွန်ဒမ် ရဲ့ပုံက သစ်သစ်လွင်လွင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အလှုရှင်တွေရဲ့စေတနာကြောင့် သူလိုတာထက်ပိုလျှံတဲ့ပိုက်ဆံတွေလက်ခံရခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူကတော့ အရင်သံပုရာသီးရောင်းတဲ့နေရာမှာ နေဆဲ၊ ရောင်းဆဲပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘဝက သံပုရာသီးတွေမရောင်းရဘူး၊ ကြောင်လေးတွေနဲ့မနေရဘူးဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်မရှိလို့ပါတဲ့။
လက်ရှိမှာလည်း လွန်ဒမ် တစ်ယောက်သံပုရာသီးလေးတွေရောင်းနေဆဲ၊ သံပုရာသီးလေးတွေ ဈေးနည်းနည်းလေးပိုလာတာကလွဲရင် လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းနေဆဲပါ။ သူ့ခံယူချက်က ရှင်းပါတယ်။ သံပုရာသီးတွေရောင်းမယ်။ ကြောင်လေးတွေကို အစာကျွေးမယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာလည်း သံပုရာသီးရောင်းမယ် .....
" သူတို့ကိုအစာကျွေးတယ်ဆိုတာ ဘုရားကချီးမြှင့်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်မကျွေးတော့ ဘယ်သူကကျွေးမှာလဲ ? "
Source - Bangkok Post မှ A rugged man with big hearts - Homeless man always feed stray cats before himself everyday ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။
“ M “ သင်္ကေတလေး လက်ဖဝါးပေါ်မှာပါနေရင် ကံအကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါ
ခံတွင်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်သတိမထားမိသေးတဲ့ မှားယွင်းမှုများ
iPhone ကနေ ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ့် Iconic အဖြစ်ဆုံး Feature ( ၅ ) မျိုး
Aircon နဲ့အိပ်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး နဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ
8 months ago by yarzar
လတ်ဆတ်တဲ့ပန်းရနံ့ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုပျောက်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းစေတာ သင်သိပါသလား?
ဇန်နဝါရီလမှာ မွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာ သူများထက် မွေးနေ့လက်ဆောင် အရနည်းကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ